အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: August 2009
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:18 AM 17 comments Links to this post
အင်္ဂါဆယ်ပါး ပြည့်စုံခြင်းတော့ အတူတူ..သို့ သော်
ဘုရားလောင်းတို့ ၏ ကျင့်စဉ်။
သူ ကျင့်ခဲ့တာ သူတော်ကောင်းတရား
ပါရမီတရား (၁၀)ပါး၁။ ရက်ရော ကူညီစောင့်ရှောက်
၂။ စည်းကမ်းရှိသူ၊ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သူ
သန့် ရှင်းစင်ကြယ်သော အကြံအစည်၊
စောင့်ထိန်းမှု ၏ သီလ ပါရမီ
၃။ တစ်ကိုယ်ကောင်း မဆန်သူ၊
မိမိပျော်ရွှင်မှု၊ ကိုယ်ကျိုးကို စွန့်လွှတ်နိူင်သူ၏
၄။ ပညာရှိသူ ၊ အမှန်တိုင်းသိမြင်နိူင်သူပီပီ
ပညာ ၏ ပါရမီ
၅။ အင်အားနှင့် ဇွဲကောင်းသူ
လုံ့လ ၀ီရိယ နှင့် ကြိုးစားအားထုတ်နိူင်သူ
၀ီရိယ ဆိုသော ပါရမီ။
၆။ စိတ်ရှည် သည်းခံခွင့်လွှတ်နိူင်သူ
ကောင်းကွက်ကိုသာ ရှုမြင်တတ်သော ခန္တီစ ပါရမီ
ရိုးသားဖြောင့် မတ် နှုတ်မြွက်တည်သူ
သွေဖည် ခြင်းမပြုခြင်းဆိုသော သစ္စာ ပါရမီ။
၈။ သံမဏိစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ခိုင်မာပြတ်သားသူ
စိတ်ထား ကျောက်ဆောင်အလား ခိုင်မာသူ
အမြဲတမ်းမြင့်မားသည့် အကျင့်စာဂရှိသူ ၏
၉။ လူသား အားလုံးအပေါ်
မေတ္တာ ဆိုသော ပါရမီ။
၁၀။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုမဲ့ နှလုံးသား
ညီမျှသော စိတ်ထားနဲ့ လောကဓံကို မတုန်လှုပ်သူ
စစ်မှန်သော မိမိ၏ လားရာကို စောင့်ရှောက်အပ်သော
ဥပေက္ခာ ဟူသော ပါရမီ။
ပါရမီ ၁၀ ပါး.ကျင့်ကုတ်ကြိုးစားသူက..
ပြည်သူ့ အချစ်တော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။အော်..
မွှန်းသင့်လို့သာ..ဆက်မွှန်းပါရစေတော့။
အာဏာရှင် တို့ ရဲ့
မသဒ္ဓါ မျက်နှာချိုသွေး ရင်ဖွင့်ပါရစေဦး။
ဘဘ ဆိုသော လူကြီးမင်းတို့့ခမြာများလည်း
(၁၀ ) ပါး သော အခြားပါရမီ
သူတပါးထက် ထူးကဲ..တော်တော် ပြည့်စုံရှာပါသည်။
ကိလေသာတရား၏ (၁၀) ပါး
(၅) ဒိဋ္ဌိ-အယူဝါဒ ယွင်းမှားခြင်း။
(၆) ၀ိစိကိ စ္ဆာ-သံသယ ရှိခြင်း။
(၈) ဥဒ္ဓစ္စ-စိတ်ပျံ့ လွင့်ခြင်း။
(၉) အဟိရိက-မကောင်းမှုလုပ်ရန် မရှက်ခြင်း။
(၁၀) အနောတ္တပ္ပ-မကောင်းမှူလုပ်ရန် မကြောက်ခြင်း။
မိန်းမယောင်္ကျားတို့ ၌လွန်ကျူးခြင်း၊ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း
မနောဒုစရိုက်သုံးပါး၁-အဘိဇ္ဇာ-သူ့ ဥစ္စာကို ကိုယ်ဥစ္စာဖြစ်စေလို၍ကြံစည်ခြင်း၊
သူ့ ဘက် ကိုယ့်ဘက် နှစ်ဖက်စလုံး
(၁၀) ပါးတော့ (၁၀) ပါး ပြည့်စုံပါတယ်။
သူတော်ကောင်းနဲ့ သူယုတ် ဆိုသော..
မသဒ္ဓါ ( ၈။၂၀။၂၀၀၉)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:22 AM0comments Links to this post
သစ္စာ မတည်သူ..သစ္စာပေးရန် .မရှိ
သခင်က မုန့် ကြွေးမှ
ပွဲထဲက ခွေးကလည်း မီးကွင်းထဲခုန်ပြမယ်။
ကန်ထဲက လင်းပိုင်ကလည်း ဂျွမ်းထိုးပြမယ်။
ရော့ ပတ္တမြား.ရော့ နဂါး..
ဆန်ပေးရင်.ဆေးရ..အလုပ်လုပ်မှ လုပ်ခ ရ
အနိူမ့်ဆုံးသော လူတန်းစား ပြည့်တန်ဆာမ တောင်
သစ္စာရှိမှ..သစ္စာဆိုတာ ပြန်ပေးဖို့ ရှိတယ်။
မင်းမှာ သစ္စာ..လူမှာ ကတိ..
နှုတ်ထွက် စကားကို အလေးထား..
အနှစ် (၂၀) ကျော်လို့ ..
NLD အနိုင်တွေ အရည်ပျော်ခဲ့ပြီ
ဒီတခါ မဲခိုး..စစ်တပ် တမတ် ထပ်ရွေးမည်။
သူတို့ကတိကို ယုံ..
ဒို့နှစ် (၂၀ ) ကျော် ကုန်ခဲ့ပြီ။။
နအဖ တဲ့ အဆိုးရပါတဲ့ဟဲ့
ကိုယ်နဲ့ခု..မဆိုင်ရင်တောင်မှ
ယမင်းရုပ်လေး တပြပြ..ဘကြီိးအောင်က ညာတယ်..
ရာဇပလ္လင် ပုတ်ပုတ်ပြ..ဘကြီးရွှေက ညာတယ်။
တိုင်းပြည်သာ အပေါင်ဆိုင်ပို့ လိုက်ကြပေတော့။
တောင်းဆိုး ပလုံးဆိုးထက် စုတ်ပဲ့ခဲ့ ပြီ..
ဒါ ဒို့ ပြည်။
ဒီမြေ တစ်လက်မ..ဒီမြေ တစ်မှုန်တစ်မွ
ချွေးစက် နဲ့ ဆေးထားရတဲ့ မြေ
သွေးစက်နဲ့ ရင်းထားရတဲ့ မြေ
အသက်နဲ့ ခင်းထားရတဲ့ မြေ
မြေးမြစ်တွေ ကျွန်မဖြစ်စေချင်လို့ 
အာဇာနည်.ဝိညာဉ်တွေ စွန့် ခဲ့ကြတဲ့မြေ
လူမျိုးချင်း စစ်ကျွန်ပြုလို့ ရရိုးလား..
ဒီလိုဘဲ ငူတူတူ ထိုင်ရကြေးလား..
မြန်မာ ယောက်ျား၏ သတ္တိ..
ဒို့ ခေတ်ကျ မှ ခြစားတာ ရင်မချိဘူး.
ဒို့ ခေတ်ကျမှ ညံ့လားဟေ့မောင်ရို့ 
မျက်နှာမှာ အိုးမည်း..သန်းရွှေ သုတ်ခဲ့ပြီ။
ဒို့ လူလေးများ ဆိုသလေး…
ဒို့ဘိုးဘွားအမွေ..ဒို့ အားလုံးပိုင်ရမည်။
ဒို့ သားမြေးလက်ထက်..မြန်မာဟေ့ မော်ကြွားစေရမည်။
အာဇာနည် အရိုးများ ဒို့ ဆံထိုးထိုး..
မသဒ္ဓါ ( ၈။၁၈။ ၂၀၀၉)
ရဲကြပါမောင်တို့ ..ရဲပါစေ..မယ်တို့ ..ဘိုးဘွား၏ တာဝန် မိမိတို့ ကျေကြပါစို့ ။ မပြီးသေးသော သပိတ်ပွဲ ပြန်စစို့ ။
အားလုံးညီညာ..တွန်းကြပါ..အောင်ပွဲ အရှေ့ ဆီမှာ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:50 AM0comments Links to this post
သတ္တိ ဗျတ္တိ နှင့် နတ္တိ။ သင်..မည်သူလည်း ရဲဘော်..
နားထွင်း သျှောင်ထုံးမဲ့ မင်္ဂလာပွဲတော်
ရန်သူရဲ့ မွန်နယ် နမိတ်..
" ဘယ်သူ သတ္တိရှိ လိုက်ရဲကြမလည်း" တဲ့
အယောက် ၅၀၀ အတွက်..
နာကြင်မဲ့ရွှဲ့ တွန့် လိမ်သူ..
မိမိ ဖာသာ အပ်ဖျား..
" ရဲပေ့ နောင်တော် မင်းလိုက်ခဲ့ "
သူရဲကောင်း“ဗလမင်းထင်” ရဲ့ အလှည့်
အပ်စိုက်လိုက်ခိုက် အသားနာကြောက်ရွံ့ 
အမှတ်တမဲ့ တွန့်သွားတဲ့ အခါ
" မောင်မင်း နန်းတော်စောင့်ပြီး နေခဲ့"
မျက်နှာနီမြန်း ရက်ရမ်းရမ်းနဲ့ဗလမင်းထင်
သူ့ခါးကြားက ဓားမြှောင်ကိုထုတ်လို့ ၊
သူ့လက်နဲ့ သူ့ အူတွေကို ဆွဲထုတ်ပြတယ်။
“ ဒီမှာကြည့်ပါ ရဲမက်တို့ 
အပ်ထက် နာကြင်တဲ့ ဗိုက်ကွဲနာ
ဒါ...ဗလမင်းထင်မှာ ရှိ်တဲ့ သတ္တိ..
အူတစ်စကို ဘုရင့်နောင်ရဲ့ လက်ထဲထည့်
အူခွေ ဆုံးထိ နောက်ဆုတ်ပြေးပြ..
ဗလမင်းထင် ရဲတယ် မရဲတယ်။
သူ့ အရှင် တပင်ရွှေထီးက
သို့သော် သတ္တိကား မရှိပေ”
ဗိုလ်ချုပ် ဖွဲ့ သော စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူကို သတ်မည်လော။
သင်မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို
သင်၏ နှမ အပျိုစင်အား
အာဏာရူးတစ်ယောက်၏ နျူကလီယာ အိမ်မက်အတွက်..
သင်သည် ဦးဆွေးဆံမြေ့ ရဲရင့်၏ လော။
သတ္တိ ဗျတ္တိ နှင့် မိုက်ခြင်း ၏ ခြားနားမှု
ရဲရင့် ခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်..သုံးသပ်လေ့လာ..
သင် ကိုယ်တိုင် အဖြေရှာ
သင်သည်..အပ်လက်စိုက် မတွန့် တတ်သူလော
သင်၏ အမည်သည် သင်ပိုင်သည်။
သင့်၏ ဂုဏ်သိမ် သင်နဲ့ သာဆိုင်သည်။
သတ္တိ ဗျတ္တိ လူ သို့ မဟုတ်…
မသဒ္ဓါ ( ၈။ ၁၂။ ၂၀၀၉) မြန်မာ တပ်မတော်သားစစ်စစ်များအတွက်
ဓါတ်ပုံ ကိုမိုးသီး blog မှ ရယူပါတယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:59 AM0comments Links to this post
ပုဏ္ဍားက သူသာတယ် ထင်တယ်..
သူ နိူင်တယ် ထင်တယ်။
ပွဲကြည့် ပရိသာတ်တွေ အမြင်မှာ..
ဒီပွဲမှာ ဘယ်သူနိူင်တယ် ထင်သလည်း။..
ပုဏ္ဍား၊ လူယုတ်နံမည် ၀ယ်။
အမေ မရှုံးဖူး နိုင်တယ်။
အမေ့ ရဲ ဂရုဏာ..
အမေ့ ရဲ မေတ္တာ..
နိုင်ငံတိုင်းမှာ ပြောနေကြတာ..Free Aung San Suu Kyi
ပါလီမန်များမှာတောင်းဆိုခဲ့သည်။..Free Aung San Suu Kyi
ဂီတပွဲများမှာ..လေးစားဂုဏ်ပြုကြသည်.။ Free Aung San Suu Kyi
ကလေးက အစ ဘုန်းကြီးအဆုံး.
အမေ့အမည်၏ ဂုဏ်ကြက်သရေ...
နှင်းဆီဖြူနှယ် ရှင်းသန့် စိုပြေသည်
ကမ္ဘာလုံးက လေးစားတဲ့ အောင်ဆန်းစုကြည်။
အတ္တနဲ့နိုင်ဟန်လုပ်ပေမဲ့..
လူသားတဦး ရဲ့ တန်ဘိုး
ပြန်ဝယ် မရတဲ့ သမာဓိနဲ့ သိက္ခာ..
အပြုံးနဲ့ ရင်ဆိုင် အမေ…
ဒီတပွဲ မှာ အမေနိုင်တယ်။
ကျမတို့မြန်မာ အမျိုးသမီး
မသဒ္ဓါ (၈။ ၁၁။ ၂၀၀၉)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:49 AM0comments Links to this post
ဘ၀မှာ သမီး ဂုဏ်အယူဆုံး..ဤအရာ..
အဖေ မမြင်လိုတဲ့ ဖာနိူင်ငံမဖြစ်ဖို့အတွက်
ညီမျှ အေးချမ်း စည်းလုံးရမဲ့အစား
အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ ကို
လက်နက်ပြရမ်းကား အဖေ့ စစ်တပ်အတွက်
တရား ဥပဒေ မျှတမှု ရစေဖို့ 
သမီးရဲ့ နုပျိူတဲ့ အနှစ် (၂၀) ကျော်..
သမီးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို စတေးရင်း
ဘယ်လို ဘယ်ဝါ ကမ္ဘာကို
အဖေ လို ၀ရမ်းငွေ အထုတ်မခံရပေမဲ့
အိမ်ထဲနေရင်း အလိုလို အမှုရှာ စွပ်စွဲ
ထညက်ခဲ လိ်ု ပုရွက်မည်းတွေ ခဲနေတဲ့ဇာတ်လမ်း
သမီး ပြည်သူတွေ အတွက်ဆို..
ပန်းကောင်း တပွင့် ငွားစွင့်တယ်အဖေ။
သမီး အမည်က ရှင်းသန့် တယ်။
ကျမ အတွက် ပီတိတစ်ရပ်
အဖေ့လို လုပ်ကြံခံရတောင်..
ကျမ အဖေ့ လိုဘဲ မားမားမတ်မတ်ပါ
လူရဲ့ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်း..
အဖေ ရယ် ၀မ်းမြောက်ပါ
အဖေ့ ဂုဏ်သိမ် ချီးမြောက်ရန်.
အဖေ ပေးခဲ့တဲ့ ဘ၀..
အမေ ပေးခဲ့တဲ့ ခန္ဓာ..
အဖေ ချန်ထားတဲ့ စိတ်အမွေ.
အမေ ချန်ထားခဲ့တဲ့ မိန်းမ အိနြေ္ဒ
ကျမ ချစ်တဲ့ အမိမြေ…
ရောက်ရာ အရပ်က သာဓုခေါ်..
မသဒ္ဓါ ( ၈။ ၁၁။၂၀၀၉)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:48 PM0comments Links to this post
အာဇာနည်မည်သူသာ စွန့် လွှတ်ရိုး..
ဘ၀ရဲ့ အိမ်ထဲ အရည်ပျော်..
နှစ် ၂၀ ကျော်..ပြန်မတွေးသတိမရနဲ့ 
သင်သည် ပျား၏ ဘုရင်မ..
သင်သည်..ကျွန်ပ်တို့ ၏ မျှော်လင့်ချက်မိုးတိမ်..
မည်သို့ သောအခါမှ ဆေးပြယ်မမှိန်ဘူး။.
အမည် မသေ နိူင်သော အာဇာနည်..
ပြည်သူတို့ ၏အမေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။
မသဒ္ဓါ ( ၈။၁၀။၀၉)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:44 PM 1 comments Links to this post
လာဘော , အလာဘော
ပစ္စည်းဥစ္စာပေါများခြင်းနဲ့ နည်းပါးခြင်း ။
ယသော , အယသော
အခြွေအရံများခြင်း၊ နည်းခြင်း ။
နိန္ဒာ , ပသံသ
ချီးမြှောက်ခံရခြင်း နဲ့ကဲ့ရဲ့ခံရခြင်း ။
သုခံ , ဒုက္ခံ
ချမ်းသာခြင်း နဲ့ဆင်းရဲခြင်း ။
ကြံ့ကြံ့ ခံနိုင်မှ သင်ဟာ လူ..
ရှေ့ နေတွေ အပြစ်တင်ဖမ်း.
အယုတ်တ အနတ္တ ထွက်ရဲတဲ့ပါးစပ်
ပြောမယုံစရာ ဒို့ တွေဟဲ့ မြန်မာပြည်သား။
online တွေပေါ် လိုက်ဆဲ
သူများ ငါ့ မမြင်ဘူးထင်လည်း..
သူများ ငါ့မသိဘူး ထင်လည်း..
မင်း ကိုယ်စောင့်နတ်ကို လိမ်မရ
ကိုယ် လိပ်ပြာကို ညာမရ..
ကိုယ့် ဆီပြန်မှန်မဲ့ အဖြစ်
အပြစ်မရှိသူ စွပ်စွဲ..ငရဲမှာ တလည်လည်။
ဘုရားရှင်တောင် စိဉ္စမာဏနဲ့ 
တနေ့ သမိုင်းက စကားပြောမယ်။
သူများ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆိုတာထက်..
လောကဓံ တရား ရှစ်ပါး
ကျမ နှလုံးသားထဲ ရှိတယ်။
မိမိ ပြုသော ကံအကျိုး..
အလှည့်ကျမှ မနွဲ့ ကြေး
မင်းရာဇ၀င် မင်းရေးတယ် မောင်ငယ်။
မသဒ္ဓါ ( ၈။၇။၂၀၀၉)
cbox တကာလည်..မဆီမဆိုင် ကျမနာမည်ဖော်..တခြားသူကို ဆဲနေသူများအတွက်.။ လက်မမကောင်း လက်မ. ခြေမမကောင်း ခြေမ ပြောကြပေါ့။ တခြားသောအရာ..ကျမနဲ့ ဘာမှမပတ်သက်ပါဖူး။ ကျမ ဘယ်နေရာရပ်နေတာ ကျမဖာသာသိပါတယ်။ ကျမ ဘာလုပ်နေတာ ကျမ သိပါတယ်။ ပေးစားလည်း ကျမက..ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ပြောသူရဲ့ လူသိက္ခာ..ပြောသူရဲ့ အကျင့်စာဂသာ ပိုညစ်ညမ်းစေလာတာပါ။ အံမယ်မင်း မသေလို့ တွေ့ ရ မေ့မရပါဖူး. ကျမချစ်သော မောင်နှမများအတွက် တုံးကျော်မက မသေပါဖူး..မသဒ္ဓါ ကတော့.ပန်းပန်လျှက်ပါဘဲ။ စိတ်ရွှင်လမ်းဖြာ..ကျမ်းမာလျှက်ပါရှင့်..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:02 AM0comments Links to this post
ထပ်လာပါလိမ့်ဦးမယ်..ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ..ငွေရောင်ပိတ်ကားဆီ ဆက်လက်စောင့် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:42 AM2comments Links to this post